-Dhacdo Shiinaha Cable Aluminium Tape / Aluminium Alloy Tape for Cable Birta Difaaca iyo Warshada Hubinta iyo alaab-qeybiyeyaasha |HAL ADDUUN
Qalabka Fiber Fiber-ka ee indhaha
Buuxinta Taxanaha Qalabka
Taxanaha Cajaladda Olol-celiska
Taxanaha Cajaladda Birta
Taxanaha Cajaladda Semi-conductive
Taxanaha Qalabka Extrusion
Cajaladda Copper ee MV&LV Cable Shielding
Cajalad Galvanized Bir ah oo loogu talagalay Hubinta Cable-ka
Cajalad aluminium ah / Aluminium Alloy Tape ee loogu talagalay gaashaanka birta ee fiilada iyo hubaynta
Shuruudaha Lacag-bixintaT/T, L/C, D/P, iwm.
Waqtiga dirida20 maalmood
Meesha Asal ahaanShiinaha
Dekadda SoodejintaShanghai, Shiinaha
Baakadahakartoon ama sanduuq alwaax ah, 50kg / baakidh ama si waafaqsan shuruudaha macmiilka
Cajalada aluminiumka/aluminiumka aluminiumku waxay ka samaysan tahay aluminium saafi ah ama aluminium aluminium ah oo lagu shubay gariiradaha aluminiumka ah, gariiradaha aluminiumka kulul ee duuban, lagu duubay dhumucyo kala duwan iyo ballac mashiin wareeg ah oo qabow, oo lagu farsameeyay nuugista ama hababka kale ee daaweynta kulaylka, ama iyada oo aan la daaweyn kulayl, oo ugu dambeyntii si dheer loo farsameeyay mishiinka xiiraya oo si qotodheer loo kala gooyay fiilooyinka birta ah ee ballacyada kala duwan.
Cajaladda aluminiumka / aluminium aluminium-tape waa mid ka mid ah alaabta ceeriin ee muhiimka ah ee loo isticmaalo fiilooyinka leh korantada sare ee korontada, xoogga farsamada iyo waxqabadka wanaagsan ee waxqabadka.Waxay ku habboon tahay duubista, duubista dhererka, alxanka argon, dhejinta iyo hababka kale.Waxaa inta badan loo adeegsadaa lakabka gaashaanka birta, lakabka gaashaandhigga cajaladda bimetallic, lakabka gaashaandhigga oo isku xidhan iyo lakab aluminium ah oo fiilooyinka korantada leh iyo fiilooyinka korantada ee xudunta aluminiumka ah ee fidsan.Waxay ka ciyaartaa doorka ka-hortagga faragelinta goobta korantada, hubaynta cadaadiska shucaaca, iyo ilaalinta biyaha iyo qaadista hadda socda ee gaaban.Isticmaalka cajalad aluminium / aluminium aluminium aluminium ah sida lakabka gaashaanka fiilada iyo lakabka galka birta ayaa sidoo kale faa'iido u leh dhimista miisaanka fiilada.
Cajaladda aluminium/cajaladda aluminiumku waxay leedahay sifooyinka soo socda:
1) Dusha sare ee alaabtu waa mid siman oo nadiif ah, iyada oo aan lahayn cillado sida duuduubka, dildilaaca, diirinta, burs, iwm.;
2) Waxay leedahay sifooyin farsamo iyo koronto oo aad u wanaagsan, waxayna ku habboon tahay hababka farsamaynta sida duubista, duubista dhererka, iyo alxanka alxanka argon.
Waxay ku habboon tahay lakabka gaashaanka birta, lakabka gaashaandhigga iyo lakabka aluminiumka dacalka leh ee fiilada korantada iyo aluminium alloy core extruded fiilada korantada.
0.30 ilaa 0.50
0.50 ilaa 1.50
1.50 ilaa 6.00
0.50 ilaa 0.80
0.80 ilaa 1.50
1.50 ilaa 3.00
0.20 ilaa 0.50
230 ilaa 280
Fiiro gaar ah: Dhererka iyo ballaca cajaladda aluminium / aluminium aluminium aluminium ah ayaa lagu bixin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha;Marka lagu daro darajooyinka iyo heerka xaashida, darajooyinka kale iyo heerka xariijinta aluminium/aluminium aluminium sidoo kale waxaa lagu bixin karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
1) Waa in lagu kaydiyaa bakhaar nadiif ah, nadiif ah, hawo leh oo qallalan;
2) Alaabta waa in aan lagu dhex kaydin alaabada kiimikada ee firfircoon sida aashitada iyo alkali iyo walxaha qoyan;
3) Heerkulka qolka kaydinta alaabadu waa in uu ahaado (16～35) ℃ iyo qoyaanka qaraabada ahi waa in uu ka hooseeyaa 70%;
4) Ha furin baakidhka isla markaaba markaad si lama filaan ah uga beddesho goobta kaydinta heerkul hoose una beddelo heerkul sare.Waa in lagu kaydiyaa meel qallalan muddo cayiman, fur xirmada ka dib marka heerkulka alaabtu kordho si looga hortago oksaydhka alaabta;
5) Alaabta waa in laga ilaaliyaa cadaadiska culus, garaaca iyo dhaawaca kale ee farsamada inta lagu jiro kaydinta iyo gaadiidka.
Hore: Ololka Sare ee Dib-u- Celinta, Cajalad Dab-demiska Aan Halogen ahayn iyo qiiq-hooseeya
Xiga: Cajaladda Copper ee MV&LV Cable Shielding
Q1: Ma booqan karnaa shirkaddaada?
J: Waanu rajaynaynaa imaatinkaada, waxaanan ku hogaamin doonaa inaad soo booqato warshadeena.
Q2: Sidee degdeg ah ayaan u heli karaa xigashada?
A: Caadi ahaan waxaanu ku soo qaadanaa 24 saacadood gudahooda alaabta fiilada caadiga ah ka dib markaan helno su'aashaada.Haddii aad deg deg u tahay inaad hesho qiimaha, fadlan na soo wac ama noogu sheeg iimaylkaaga si aan u tixgelino mudnaantaada weydiinta.
Q3: Waa maxay shuruudaha xidhidhiyahaagu?
J: Durbaan alwaax ah, palette alwaax ah, sanduuq alwaax ah, kartoonku waa ikhtiyaari, waxay kuxirantahay walxaha kala duwan ama shuruudaha macmiilka.
Q4: Waa maxay shuruudaha lacag bixinta?
A: T / T, L / C, D / P, iwm. Waxaan ku tusi doonaa sawirada alaabta iyo baakadaha ka hor inta aadan bixin dheelitirka.
Q5: Waa maxay shuruudaha bixinta?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.Waxaad dooran kartaa midka kuugu habboon ama ugu kharash badan adiga.
Q6: Ka waran wakhtiga dhalmada?
J: Guud ahaan, waxay qaadan doontaa 7 ilaa 15 maalmood ka dib markaad hesho lacagta hormariska ah.Waqtiga gaarsiinta gaarka ah wuxuu ku xiran yahay alaabta iyo tirada dalabkaaga.
Q7: Waa maxay siyaasaddaada muunad?
J: Tusaalaha imtixaanadaada ayaa diyaar ah, Fadlan la xidhiidh iibkayada si aad u codsato muunada bilaashka ah.
A: 1. Waxaan haynaa tayada wanaagsan iyo qiimaha tartanka si loo hubiyo in macaamiisheennu ay faa'iido u leeyihiin.
2. Macmiil kasta waxaanu u ixtiraamaynaa saaxiibkayaga oo aanu si daacad ah uga ganacsano oo aanu la saaxiibo meel kasta ha ka yimaadeene.
Q9: Miyaad bixisaa dhammaan qalabka fiilooyinka si waafaqsan fiilooyinka aan soo saarno?
J: Haa, waan awoodnaa.Waxaan leenahay farsamo yaqaan ku saabsan farsamada wax soo saarka kaas oo ku hawlan falanqaynta qaab dhismeedka fiilada si aad u taxdo dhammaan agabyada aad u baahan tahay.
S10: Maxay yihiin mabaadi'da ganacsi?
J: Isku dhafka ilaha.Ka caawinta macaamiisha inay doortaan agabka UGU habboon, kaydinta kharashaadka iyo hagaajinta tayada.
Faa'iido yar laakiin isbeddel degdeg ah: Caawinta fiilooyinka macaamiisha inay noqdaan kuwo tartan badan suuqa oo si degdeg ah u horumaraya.
Cajalada buluuga ah ee Mylar
HAL ADDUUN waaLINT TOPSShirkad la wada leeyahay oo ku tiirsan LINT TOPS in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah siliga iyo fiilada la xareeyay , HAL ADUUN waxay leedahay saldhig macaamiil adag tan iyo markii la dhisay.HAL ADDUUN waxa uu ku caawinayaa samaynta iyo socodsiinta in ka badan 1, 000 silig iyo warshado xadhig 2 sano gudahood
sii akhri >
Madaxa Xafiiska Shiinaha
Xarunta Iibka: Mrs.Ashley
Iimayl:iibka @ owcable.com
Cinwaanka: Xinsheng Plaza, Hubei Road, Xuzhou, Shiinaha
Xarunta Waqooyiga Afrika
Xafiiska Iibka: Mudane Saifi
Ciwaanka: Lot No 110, xigasho Acila-Radieh Ain Sfiha Setif 19000-algerie
Cinwaanka:Ciwaanka: Lot No 110, xigasho Acila-Radieh Ain Sfiha Setif 19000-algerie
Cajaladda Dahaarka Mylar, Cajaladda Dahaarka Cable, Mica Tape Insulation, Mica Tape Dahaarka Korontada, Ht Cajaladda Dahaarka, Mica Insulation Cape,
KU SAABSAN HAL ADDUUN
Akhri wax dheeraad ah >>
Xafiiska Iibka: Abdelhabib Chareb
Cinwaanka: Avenue du Maghreb Arabe, Residence du lacapt D2-2, Menzel jemil, Bizerte 7080, Tunisie
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.Alaabooyinka Kulul - Khariidadda goobta